Baby – စာမကျြနှာ3– Healthy Life Journal
မွေးကင်းစကလေးငယ်တို့၏ နေမကောင်းဖြစ်နေသော အမူအရာများ
မွေးကင်းစကလေးငယ်နဲ့ လသားကလေးငယ်တွေက စကားမပြောတတ်သေးတာကြောင့် သူတို့နေမကောင်းဖြစ်နေသလား၊ မအီမသာဖြစ်နေသလားဆိုတာ သူတိုရဲ့ အမူအရာတွေကိုကြည့်ပြီး သိဖို့ကြိုးစားရပါမယ်။ သူတို့လေးတွေ နေမကောင်းဖြစ်နေချိန်မှာ အတွေ့ရများတဲ့ အမူအရာတွေကိုကြည့်ရင်း သူတို့ကို ပြုစုပေးသင့်တဲ့ အချက်တွေကို ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။ မိခင်နို့ချို စို့ချင်စိတ်မရှိခြင်း မွေးကင်းစကလေး နာမကျန်းမှုဖြစ်ရင် အသိသာဆုံး လက္ခဏာတစ်ရပ်က...
—၊ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊— Q. လေးလအရွယ်သားလေး အူကျပြီး ဝေဒနာခံစားနေရပါတယ်။ ဆရာဝန်ပြတော့ အသက်အရမ်းငယ်သေးကြောင်း ရှင်းပြပါတယ်။ တခြားနည်းလမ်း ရှိပါဦးမလား အကြံပြုပေးစေချင်ပါတယ် ခင်ဗျ။ C C(FB) A. အသက်က လေးလဆိုတော့...
ကလေးများတွင် ကျန်းမာရေးနှင့် မညီညွတ်သည့် အစာစားလျှင် အသက် ၁၂ နှစ်မတိုင်မီ နှလုံးထိခိုက်မှု စတင်ဖြစ်ပေါ်
———၊ ကိုထက် ၊——— ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်တဲ့ အစာစားတာကြောင့် ကလေးတွေက အသက် ၁၂ နှစ်အရွယ်မှာ နှလုံးထိခိုက်မှု စတင်ဖြစ်ပေါ်တတ်ကြောင်း လေ့လာမှုတစ်ခုအရ သိရပါတယ်။ လူအများစုက ငယ်ရွယ်ချိန်မှာ နှလုံးကျန်းမာရေး စတင်ထိခိုက်မှုရှိပါက ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်မှုမရှိတဲ့ အစာစားခြင်းကြောင့် နှလုံးထိခိုက်နိုင်ခြေ...
ကလေးမျက်လုံးထဲတွင် ဖြစ်နေသော ကင်ဆာကို မိခင်ဖြစ်သူမှ ဓာတ်ပုံရိုက်ရင်း တွေ့ရှိခဲ့
———၊ ကိုထက် ၊——— အမ်မလီစမစ်တို့ မိသားစုဟာ အင်္ဂလန်တောင်ပိုင်းရှိ ကမ်းရိုးတန်းဒေသတစ်ခုမှာ နေထိုင်ကြသူတွေဖြစ်ပြီး အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ် အမ်မလီစမစ်မှာ သားလေးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ သူရဲ့သားလေးဂျက်ဆမ် အသက် ၁၁ လသားအရွယ်မှာ အလှဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံရိုက်ခဲ့ရာ ဓာတ်ပုံထဲက ကလေးမျက်လုံးတစ်ဖက်မှာ မှုန်ဝါးဝါးအဖြူရောင် အစက်လေးတစ်ခုကို...
—၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊— Q. ကလေးတွေကို ဘယ်အရွယ်မှာ ဒိန်ချဉ် စတင်ကျွေးသင့်ပါသလဲ။ NuNu(FB) A. ကလေးအသက်ရှစ်လပြည့်ပြီဆိုတာနဲ့ ကလေးကို ဒိန်ချဉ်စတိုက်လို့ ရပါပြီ။ ပြီးရင် နို့နဲ့နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေကို စကျွေးနိုင်ပါပြီ။ ဘယ်လိုကျွေးမလဲဆိုတော့ ညနေသုံးနာရီ...
—၊ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊— Q. ကလေးက ၉ နှစ်ပဲရှိသေးတယ်၊ ရေကျောက်ပေါက်နေလို့ ဘယ်လိုလုပ်ပေးသင့်ပါသလဲ။ (သန်လျင်သဘာဝတရားရိပ်သာမှ မေးမြန်းသူတစ်ဦး) A. ရေကျောက်ရဲ့သဘောက ဖျားမယ်၊ ဖျားပြီး ရက်ပိုင်းအတိုင်း အရည်ကြည်ဖုလေးတွေက ခန္ဓာကိုယ်မှာ စပေါ်မယ်၊...
ကလေးတွေကို ဘာကြောင့် ပုံမှန်ပွေ့ဖက်ပေးဖို့ အရေးကြီးတာလဲ ….
……………၊ မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊…………… သင့်ကလေးကို အနည်းဆုံး တစ်နေ့တစ်ကြိမ် ပွေ့ဖက်ပေးပါ။ ပွေ့ဖက်ပေးတာက စိတ်ခံစားချက်ကောင်းစေပြီး ကလေးကို ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေပါတယ်။ ကလေးတွေကို ပွေ့ဖက်ပေးတာကြောင့် ကြီးလာတဲ့အခါ ကြင်နာတတ်ပြီး ကောင်းတဲ့စိတ်နှလုံးသားကို မျှဝေတတ်လာတယ်၊ လူတွေနဲ့ ခိုင်မာတဲ့သံယောဇဉ်ကို ဖန်တီးတတ်လာပါတယ်။ ပွေ့ဖက်ခြင်းက...
ကလေးငယ်ကို ရိုက်နှက်ပြီး ဆုံးမသင့်ရဲ့လား……
————–၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊————– အရင်တုန်းက ကလေးတွေကို ဆုံးမတဲ့နေရာမှာ မိဘတွေဟာ အိုးကောင်းလိုချင်ရင် နာနာပုတ်ပေးရတယ်ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကားအတိုင်း အုပ်ထိန်းကြပါတယ်။ ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ပြုမူနေထိုင်ပုံမှားနေရင် မိခင် ဒါမှမဟုတ် ဖခင်ဖြစ်သူက လက်/တုတ်နဲ့ ရိုက်ပုတ်ပြီး အပြစ်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ကလေးဟာ နာကျင်သွားရင်...
ကလေးငယ်များ အိပ်ရာဝင်ချိန် နောက်ကျခြင်းက အ၀လွန်စေနိုင်
——၊ ကိုထက် ၊——- ဆွီဒင်နိုင်ငံမှ လေ့လာသူတွေဟာ ကလေးငယ်တွေ အိပ်ရာဝင်နောက်ကျခြင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ လေ့လာမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ၄င်းတို့ရဲ့ လေ့လာချက်အရ အသက် ၆ နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေ အိပ်ရာဝင်နောက်ကျခြင်းကြောင့် အ၀လွန်ခြင်းကို ပိုမိုဖြစ်လာနိုင်စေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ လေ့လာချက်တွေအရ ဆွီဒင်နိုင်ငံရှိ...
ကိုထက် အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကုသမှုခံယူဖို့ လိုအပ်တဲ့ ကလေးငယ်တွေရဲ့ လေးပုံတစ်ပုံလောက်သာ ကုသမှုခံယူခွင့် ရရှိလျက်ရှိတယ်လို့ လေ့လာသူတွေက ထုတ်ပြန်ပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်နဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်းမှာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကုသမှုခံယူဖို့ လိုအပ်တဲ့ အသက် ၁၈ နှစ်အောက် ကလေးငယ်...